I-10 ephezulu kakhulu "I-Classical Literary Classics" - IiNcwadi eziViweyo
Yintoni Eyenza Incwadi Ekhutshelwe?
Xa iNkundla ePhakamileyo iququzelele umthetho wokuhlambalaza eMiller v. California (1972), kwacaca ukuba umsebenzi awukwazanga ukuhlulwa njengento ehlazisayo ngaphandle kokuba kuboniswe ukuba "ithathelwe ngokupheleleyo, (it) ayikho into ebhaliweyo yokubhala, ezobugcisa, ezopolitiko, okanye isayense. " Kodwa eso sigqibo sasinzima; kwiminyaka ekhokelela ku- Miller , abalobi nabaninzi abavakalisi batyhutshiswa xa besasaza imisebenzi esele ifundwa njengama-classical literics. Nazi ezimbalwa.
Xa inkcazo evela ku- Ulysses yaxhaswa kumagazini wee-1920 wokubhala, amalungu e-New York Society of the Suppression of Vice baxakeka ngumfanekiso we-masturbation wenombolo kwaye bazithabathele ukuvimba ukushicilelwa kwe-US yomsebenzi opheleleyo. Inkundla yesilingo yahlaziya inveli ngo-1921, yafumanisa ukuba iyimifanekiso engcolileyo, kwaye yayivunyelwe phantsi kwemithetho yokungcola. Isigwebo saguqulelwa iminyaka engama-12 kamva, savumela ukushicilelwa kwe-US ukushicilelwa ngo-1934.
Yintoni ekhoyo ngoku incwadi eyaziwayo kaLawrence yayiyimfihlelo encinane engcolileyo ngexesha lokuphila kwakhe. Ngapapashwa ngo-1928 (iminyaka emibini ngaphambi kokufa kukaLawrence), le ngxelo yokuphandana phakathi kwowesifazane ocebileyo kunye nomkhonzi wendoda yakhe yazingabonakali kwaze kwaba yilapho i-US ne-UK abavakalisi beyifakelela ngo-1959 no-1960, ngokulandelana. Zomibini iimpapasho ziphefumlele izilingo zokuzihlaziya eziphezulu-kwaye kwimeko zombini, umshicileli uphumelele.
Xa amaxwebhu avela kuFlaubert kaMadame Bovary ashicilelwa ngo-1856 eFransi, amagosa okuthotyelwa komthetho ayethuswa kwi-Flaubert's (ingabonakaliyo) ingcamango yecala lomfazi ophinga. Bazama ngokukhawuleza ukuvimba ukupapashwa ngokupheleleyo kwincwadi ephantsi kweefransi zokungcola ngokugqithisileyo, ezikhutshelwe icala. UFlaubert uphumelele, le ncwadi yanyathelisa ngo-1857, kwaye ihlabathi lombhalo alizange liye lalinganayo
UThixo wezinto ezincinci wathola intsha engumvelisi waseRajane uRoy izigidi zeedola ezibukhosini, udumo lwamazwe ngamazwe, kunye ne-1997 Booker Prize. Kwakhona wamfumana ilingo lokunyelisa. Ngo-1997, wabizwa kwiNkundla ePhakamileyo yaseIndiya ukukhusela ibango lokuba imifanekiso yesiganeko kunye nesinye isihlandlo sezesondo, ezibandakanya umfazi ongumKristu kunye nomkhonzi ongumHindu ophantsi, owonakalise ukuziphatha komntu. Walwa ngokuphumelelayo neentlawulo kodwa akayi kubhala inoveli yakhe yesibili.
"Ndabona iinjongo ezingcono kakhulu kwisizukulwana sam sitshabalaliswa ngobuhlanya ...," iqalisa inkondlo kaGinsberg "Bhomboza," efundeka ngathi ingaba yintetho efanelekileyo (ukuba ingenjalo) intetho yokuqala okanye i-Easter homily homily. Isalathisi esingcolileyo kodwa esicacileyo esichaphazela ukungena kwesalathisi - ukuxhamla ngemigangatho yeSouth Park - yafunyanwa uvavanyo lwe-Ginsberg ngo-1957 kwaye yamguqula kwisibongo se-Beatnik esicacileyo kwisigxina se-poet.
UBaudelaire akazange akholelwe ukuba imbongi ibinayo nayiphi na into ebalulekileyo, ephikisana ukuba injongo yayo kukuba, kungekhona ukuthetha. Kodwa kwinqanaba lokuba Iintyatyambo Zobungendawo ziyi-didactic, lixubusha ingqondo endala yesono sangaphambili: ukuba umbhali uyaphambukiswa, kunye nomfundi othukayo ngakumbi nangakumbi. Urhulumente waseFransi uhlawule uBaudelaire ngokuthi "ukuziphatha konakalisa ukuziphatha komntu" kwaye unqandezele iingqungquthela zakhe ezintandathu, kodwa zapapashwa iminyaka emathandathu emva kokubaluleka.
"Ndiye ndenze i-compact kunye nam," uMiller uqala, "kungekhona ukutshintsha umgca wento endibhalayo." Ukugweba ngovavanyo luka-1961 olumnyama olwalandela i-US incwadi yakhe yokubhala, wayethetha. Kodwa lo msebenzi wecala-autobiographical (oko uGeorge Orwell wabiza umnqweno omkhulu kunazo zonke obhalwe ngesiNgesi) udlalwa ngaphezu kokululeka. Khawucinge nje ukuba Ukukhanya Okungapheliyo Kokuba kufana njani ukuba uWowody Allen wabhala, kwaye unengcamango efanelekileyo.
"I-Well of Loneliness" (1928) nguRadclyffe Hall
Uhlobo lwe-Well 's autobiographical uhlamvu lukaStephen Gordon luyincwadi yokuqala yecawa ye-lesbian. Kwakwanele ukufumana zonke iikopi zencwadana ezonakalisiweyo emva kokulinga kwe-1928 ye-obscenity yase-US, kodwa incwadana iye yafunyanwa kwakhona kwiminyaka emva nje. Ukongezelela ekubeni yincwadi yeklasi yokubhala ngokufanelekileyo, yinto engavumelekanga yenkcazo yexesha eli-20 leminyaka yokujonga ngesondo kunye nolwazi lwesini.
"Ukuphuma Ekugqibeleni eBrooklyn" (1964) nguHubert Selby Jr.
Iqoqo elimnyama lamanqaku amancinci angama-6 athatywayo ngokubhekiselele ekubulaleni, ukudlwengulwa kwamagqirha, kunye nokunyuka kobuhlwempu ngokubhekiselele kwintengiso yesondo kunye noluntu lwaseBrooklyn oluphakathi komhlaba. Ukuphuma kokugqibela kudlulileyo iminyaka emine kwinkqubo yenkundla yaseBrithani ngaphambi kokuba ekugqibeleni ivakaliswe ingabi yinto enyanyekayo kwisigqibo esisigxina se-1968.
UFanny Hill ubeka ulwahlulo lokuba yincwadi enqabile kakhulu kumlando we-US. Kwakuqala ukuvakaliswa ngokunyanisekileyo ngo-1821, isigwebo esingazange sagqityiwe kude kube yiNkundla ePhakamileyo ye-US iMemoirs v. Massachusetts (1966) isigqibo. Ngethuba le minyaka engama-145, le ncwadi yayiyiqhamo esinqatshelwe - kodwa kwiminyaka emva nje, uye wakhangela umdla omncinci kubantu abangabafundi.
ICatalina Island UkuLoba
Inkolo kunye neNkolo
Iibhubhe zeCarbon Fiber